Mụ na ụmụ nwoke anọ na-arahụ kwa abalị- akwụla di afọ iri n’asaa – hoo!haa!!
Mụ na ụmụ nwoke anọ na-arahụ kwa abalị- akwụla di afọ iri n’asaa
Legọsị: Akpata oyi juru ndi mmadụ ahụ ụnyahụ n’isi ụlọ ọrụ Ndi Uwe Ojii na Legọsị Steeti mgbe e gosipụtara obere ụmụ agbọghọ ndi mgbere mmadụ ghọgburu, ha bịa Legọsị ịgba akwụla n’ụlọ nkwarị akụ (hotel) dị na Iyana Ipaja.
Ụfọdụ obere ụmụ agbọghọ ndia ndi nọ n’agbata afọ iri n’ise n’afọ iri n’itoolu kọwaara ihe ha na-agabiga. Otu onye n’ime ha, Felicia Isaac, onye dị afọ iri n’asaa kọwara na ya na ụmụ nwoke anọ na-arahụ kwa abalị, ndị na-akwụ ya otu Puku Naịra maka ime otu ọnụ (short time).
Ụfọdụ n’ime ha bụ ndi gbahapụrụ ụmụ ha n’obodo ha were bịa Legọsị, n’olileanya inweta ezigbo ọrụ na akwazị akwa arịrị na njọ ụbọchị meziri na ha anghịzị agba aka ahịa ọfụma.
Destiny Itabasi, onye gbahapụrụ nwa dị afọ atọ n’obodo ya n’Akwa Ịbọm Steeti were pụta ịchụrụ aka ya sịrị na ya bịara n’ụlọ nkwari akụ ahụ ọnwa anọ gara aga, na ya na-enweta ihe ruru Puku Naịra Iri n’Ise kwa izu ụka.
N’okwu ya, Jovelin Edet sịrị na ya mee nke mbọm chi (day break) na ya na-enweta Puku Naịra Ise. Mpụ ndia pụtara ihe mgbe ndi uwe ojii wakporo ụlọ nkwari akụ ahụ dị na Ige Street, Iyana Ipaja
Previous Post: Ụmụnwaanyị emeela ngagharị iwe maka achụmanọrụ Globacom
Next Post: EGO/AKỤ/ỌGARANYA